Indlela Yokuthuthukisa Ukusebenza Kwe-SEO Yakho Ngezixhumanisi Zangaphakathi - Amathiphu kusuka ku-Semalt
Izinkulungwane zamawebhusayithi zikhona, nokuningi okuningi kudalwa nsuku zonke. Ukuncintisanangoba ukutholakala kwe-intanethi kunzima. Ukuze ube nomncintiswano ngaphezu kwabancintisana bakho, udinga ukwandisa isayithi lakho ngokusebenzisa isayithi se-SEO - vendita gonfiabili foggia. Okukodwa kweIzakhi ezibaluleke kakhulu kwi-SEO yesayithi yizixhumanisi zangaphakathi. Noma kunjalo, iningi labantu alinaki. Izixhumanisi zangaphakathi zithinta indlela yokuseshaizinjini zithola futhi zibuke okuqukethwe kwakho kanye nolwazi lomsebenzisi.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelele Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,uye wenza uhlelo lokuxhumana lwangaphakathi lokudiliza abancintisana nabo.
Indlela Yokuthola Izixhumanisi Zangaphakathi Zesihloko
Ithuluzi eliphumelelayo ongalisebenzisa ukuqoqa idatha kusayithi ukuklabalaza i-Frog. Itineziphequluli zamahhala nezingakhokhelwa. Inguqulo yamahhala yenzelwe amawebhusayithi amancane.
Izixhumanisi ezingaphakathi zangaphakathi
Ngemuva kokuthi ukuqhuma kuphelile sidinga ukuthola i-URL esicwaninga ngayo. Ukwenzainqubo esheshayo, faka ukuphela kwe-URL ebhokisini lokusesha. Ngemva kokuthola, chofoza ku-URL efanele bese uhlunga ku-HTML. Okulandelayo, chofoza"kuzixhumanisi" ezansi kwekhasi. Uzothola zonke izixhumanisi zangaphakathi ku-URL oyikhethile.
Isinyathelo esilandelayo ukuthekelisa izixhumanisi zangaphakathi. Ukuzithumela, chofoza ngakwesokudlaku-URL bese ukhetha "Thumela> Izixhumanisi".
Hlanza uhlu lokuxhumanisa ngaphakathi
Ngemva kokukhipha izixhumanisi zangaphakathi, isinyathelo esilandelayo ukuhlanza uhlu. Ikonakungenzeka ukuthi ube nama-URL aphindaphindiwe ngenxa yamakhasi we-taxonomy kanye nemigomo yokulandelela..Faka ama-URL ku-Google Amadokhumenti bese uwahlela ngama-alfabhethi.Ama-URL aphindaphindiwe azohlanganiswa ngakho-ke, kulula ukususa.
Isinyathelo esilandelayo ukucinga izinhlamvu ezikhethekile ukususa ama-URL. Uma usebenzisaI-Mac sebenzisa umyalo + F. Ukuze usebenzise i-Windows control control + F ukuyikhipha, uzoshiywa uhlu lwamaxhumanisi angaphakathi kanye neminye imibhalo ye-anchor.
Fundisisa ukuhlelwa kwe-On-Site
Ngaloluhlu lwamaxhumanisi wangaphakathi, kuzodingeka unqume ukuthi izizinda zisesayithi ziyiniufuna ukubuyekeza. Nazi izindlela zokusebenzisa.
Igama elingukhiye elisetshenziselwa i-URL, umbhalo we-anchor namathegi wethegi.
Hlola ukuthi isixhumanisi sisekhasini lokuqala.
Uma isixhumanisi sitholakala kumazwi okuqala angu-100 esihlokweni.
Usuku okushicilelwe ngalo ngalo magazini futhi uma lubuyekeziwe.
Sebenzisa i-Google Sheet ukubuyekeza zonke izixhumanisi bese urekhoda imiphumela.
Indlela yokusebenzisa ngayo kuncike ukuthi ngabe iwebhusayithi yakho isisha noma ikhona.
Ngewebhsayithi elisha, khetha ikhasi elihlosiwe bese ulisebenzisa ngendlela exoxwe ngayongenhla. Uzothola zonke izixhumanisi nokuthi zenziwe kanjani.
Okulandelayo, yenza ukuxhumana kwe-back link ukuqonda ububanzi bomsebenzi obudingekayo ekhasini eliyinhloko.Sebenzisa ikhasi eliyinhloko ukudala imibono yokuqukethwe. Udinga i-akhawunti ye-SEMrush ekhokhelwe ukudala uhlu lwegama elingukhiye. Kusuka kolwazi ofika kuloukwakha uhlu lwamagama angukhiye ngokusekelwe kokuqukethwe komncintiswano wakho.
Inqubo ihlukile uma unayo iwebhusayithi ekhona nequkethe. Ukusukaamagama angukhiye anqume okuqukethwe kwakho kwekhanda lakho. Okulandelayo, sebenzisa i-SEMrush ukuthekelisa bonke othintana nabo bese uhlola uma kukhona ikhasi elisezingeni lakho kakadeigama elingukhiye. Buyekeza ikhasi bese ulisebenzisa.
Kubalulekile ukulawula izixhumanisi zakho zangaphakathi. Izixhumanisi zisetshenziswaizinjini zokutshela amakhasi ukuthi ubheka okufanele futhi futhi usize izivakashi ukuthi zizulazula isayithi.